Onye na-ejide mmanụ gị? | Martech Zone
Fraịde, Jenụwarị 16, 2009 Monday, November 4, 2013 Douglas Karr
Kwa ubochi - ubochi nile - ndi mmadu zitere m ozi, zita m, twitter m, gaa na m, kpoo m ma ziga m ozi ozugbo site na ngalaba, ikike, CSS, mpi, isi okwu, okwu ndi ahia, onodu ahia, uzo ahia, ịde blọgụ soshal midia, wdg ana m enweta akwụkwọ ịkpọ oku ka m kwuo okwu, dee, nye aka, zute… aha ya. My ụbọchị bụ ọrụ n'aka na incredibly-emezu. Adịghị m ọgụgụ isi mana enwere m ọtụtụ ahụmịhe na ndị mmadụ mara ya. Ọ na-amasịkwa m inye aka.
Ihe ịma aka bụ otu esi etinye uru na obere obere nsogbu na ohere ọ bụla. Ihe m na-eche bụ na ọ dị ka ụbọchị ochie ebe mmanụ mmanụ ga-eme ka ụgbọ okporo ígwè sie mmanụ ka o wee nwee ike ịgafe ọsọ ọsọ ma dịkwa mfe. Wepụ mmanụ ahụ na ụgbọ oloko ahụ na-akwụsị. Oiler maara ebe, mgbe, gịnị na ole. Ọ na-adị m ka mmanụ ahụ - mana n'ọtụtụ sara mbara. Ajụjụ ndị a jụrụ m chọrọ nka na ahụmịhe m wuru n'ime iri afọ abụọ gara aga.
O siri ike iji uru ma ọ bụ cheta mmanụ ahụ mgbe ị nwere ụgbọ oloko na-agbada n'okporo ụzọ, n'agbanyeghị. Traingbọ oloko ahụ, kol, onye na-eduzi ya, egwu ndị a… ha niile ‘nnukwu’ mmefu na ‘nnukwu’ azịza enwere ike tụọ n’ụzọ ziri ezi. Beingbụ onye mmanụ mmanụ adịghị mfe. Amaara m na ụgbọ oloko ahụ na-agagharị ngwa ngwa karịa ka ọ gaara esiworị ma a sị na anaghị m ete mmanụ ụgbọ mmiri ahụ - mana enweghị ụzọ doro anya iji atụ mmetụta dị n'ụdị ọkwa ahụ.
Enweghi mmanu? Nwere ike ịzụta ihe ndị ahụ n'ebe ọzọ ma ọ bụ mee nyocha ahụ n'onwe gị. Ọ na - agbakwunye oge, mmefu, ihe egwu ma nwee ike belata ogo ọrụ ị na - enye ndị ahịa gị. Ikwesiri inwe mmanu mmanu - nzukọ ọ bụla kwesịrị.
Nke a adịghị -ada dị umeala n'obi, ma na m dị umeala n'obi echiche, ekwenyere m na ndị isi na-abụkarị ndị isi mmanụ gas. Ha na-arụsi ọrụ ike kwa ụbọchị iji wepụ ihe mgbochi ka ndị gbara ha gburugburu wee nwee ike ịkwagide ike, gbaa ọsọ ọsọ ọsọ, ma nwee ọganiihu. Ndị otu hụrụ mmanụ mmanụ n'anya n'ihi na ha nwere ike iji ha mee ihe ga-aga nke ọma. Ajụjụ a bụ ma mmanụ ahụ na-enweta mmata kwesịrị ma ọ bụ na a ghọtara maka uru enyere.
Kedu ihe ga - eme ma a jụọ gị uru?
You na-akwụsị mmanụ mmanụ ma tinye ụgbọ oloko ahụ n'ihe egwu yana iwesa iwe na ndị ọrụ ndị ọzọ tụkwasịrị gị obi? Kama, ị̀ na-achụso nnukwu ọrụ na ohere ndị ị na-atụ ma ghọta ma hà bara uru?
Ma ọ bụ… ị ​​na-arapara n'ahụ ihe ị na-akwa na? Nwere ike ịnya ụgbọ ala gị nke ọma - mana nsogbu dị na ya bụ na ụfọdụ agaghị amata ya, mara etu esi atụ ya, jiri ya kpọrọ ihe… ga-ajụkarị ya. N'ụwa a nke data na nyocha, ọ bụrụ na ịnweghị ike ịza ihe bara uru gị na nzukọ ị nwere ike ịnọ na nsogbu.
I bu mmanu mmanu? You nwere mmanụ mmanụ na-arụ ọrụ? 'Snye na-ejide mmanụ gị?
Tags: ọrụmmanụ nwere ike
Ndị na-azụ ahịa azụmaahịa dị iche!
Ụzọ na-atọ ụtọ nke ukwuu na echiche "Oiler" na IMHO, ị dabara na ebumnuche. N'ime ụbọchị ndị isi m, ewerere m ụzọ dị iche iche n'ịdụ ndị njikwa m ndụmọdụ banyere njikwa na taa na klas nchịkwa m, m na-agwa ụmụ akwụkwọ m na ọrụ onye njikwa: "bụ inye ọnọdụ ebe ndị ọrụ nwere ike ịga nke ọma" Nke a bụ ụzọ ọzọ. na-agwa ha na ọ bụ ha na-ahụ maka ịbụ ndị na-agba mmanụ nye "tinmen" ma ọ bụ ndị ọrụ ha na ọ bụghị ụgbọ oloko ma ọ bụ nzukọ.
Ihe atụ a na-amasị m nke ukwuu, m ga-ejikwa ya n'ọdịnihu. Daalụ maka post ahụ
Daalụ SBM! Daalụ maka okwu ọma!
Otu esi amalite azụmahịa na South Carolina
Ihe atụ dị mma. Nlebara anya ọ bụla na nkọwa kwesịrị ilekwasị anya.
Jenụwarị 18, 2009, elekere 10:56 nke abalị
Daalụ maka iwepụta oge mgbe niile ịza ajụjụ m. Ọkachamara gị na ịdị njikere inye aka echekwala m ọtụtụ awa nke ịchọ na nkụda mmụọ.